को बस्यो विश्व दोङको मनको डेरामा ? (भिडियो सहित) - को बस्यो विश्व दोङको मनको डेरामा ? (भिडियो सहित) -
को बस्यो विश्व दोङको मनको डेरामा ? (भिडियो सहित)
उज्यालो प्रतिनिधि ४ आश्विन २०७८, सोमबार कला/साहित्य
काठमाडौं । चर्चित गायक एवं संगीतकार विश्व दोङको मनको डेरमा को बस्यो भन्ने चर्चा यतिबेला सांगीतिक बजारमा चल्न थालेका छन् ।
वास्तविक जीवनमा मनको डेरमा को छ त्यो गायक दोङ आफैले जानुन तर सांगीतिक दुनियाँको मनको डेरामा भने नव गायिका तबु वाइबाले स्थान पाएका छन् ।
विशेषगरी गीत संगीतमा पछिल्लो चरण विभिन्न विकृतिहरु मौलाउदै गइरहेका छन् । जस्तैः भाइरल हुने नाममा गीतको शब्द छनौटमा ध्यान नदिने देखि समाजले पचाउन नसक्ने दृश्यहरु भिडियोमा समावेश गरेर युट्युबाट डलर कमाउने आदि ।
यसरी गीतसंगितलाई कहाँ पुर्याउने हुन भन्ने चिन्ता गरिरहेको बेला गायक दोङले भने पछिल्लो चरण आफ्नो मौलिकतासंगै वर्गीय दृष्टिकोण उजागर हुनेगरी एकपछि अर्को गीतहरु बजारमा ल्याइरहेका छन ।
गायक दोङले गत शुक्रबार मनको डेरा बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त गीतमा तबु वाइबाले साथ दिएकी छिन् । गायक दोङकै शब्द संगीत र एरेन्ज रहेको उक्त गीतको भिडियोमा गायक दोङ र गायिका वाइबाले नै अभिनय गरेका छन् ।
बाक्लो रुपमा तामाङ गीत संगितका सृष्टहरुको उपस्थितिमा उक्त गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । गायक दोङको पछिल्लो चरण माया भन्दा ठुलो जात हैन, घुम्दै फिर्दै, घुम्नलाई आउँदा, तल तल बग्ने, लगायत दर्जनौं गीतहरुलाई दर्शक श्रोताहरुले अत्याधिक रुचाएका गीतहरु हुन ।
हेर्नुस् गायक दोङको ‘मनको डेरामा’ बोलको भिडियो